Motorola Moto G Pro wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 11 | Androidsis
Moto G Pro waa taleefankii ugu horreeyay ee Motorola si loo helo cusboonaysiinta Android 11
Motorola waxay ka mid ahayd wax soo saareyaasha taleefannada casriga ah ee illaa iyo hadda aan u cusbooneysiin moobiil Android 11. Moto G Pro ayaa soo dhoweeyay casriyeynta noocaas ah.
Taleefankan casriga ah waxaa la soo saaray bishii May ee sanadkii hore iyadoo loo adeegsaday nooca Android 10 oo hoos imanaya barnaamijka Android One, kaas oo siinaya mudnaan ah inuu noqdo mid ka mid ah terminaallada ugu horreeya ee helaya casriyaynta ugu dambaysa uguna casrisan nidaamka deegaanka Android. Sidaa darteed Android 12 sidoo kale waxaa loo ballan qaaday isla mustaqbalka.
Cusboonaysiinta Android 11 waxay u timaaddaa Motorola Moto G Pro
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga rasmiga ah ee la socoshada shirkadda iyo isticmaaleyaal badan oo forum ah, Motorola Moto G Pro wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 11 ee UK. Waqtigan xaadirka ah, waddankan wuxuu umuuqdaa inuu yahay midka kaliya ee uu ku kala firxanayo OTA. Si kastaba ha noqotee, maalmo gudahood ama toddobaadyo yar gudahood waxay noqon doontaa mid ku baahsan adduunka.
El balastarka amniga janaweri waxay ku jirtaa xirmada qalabka cusub ee qalabka casriga ah ee casriga ah, iyo sidoo kale waxyaabo badan oo khaladaad yaryar ah, hagaajinta xasilloonida, iyo waxyaabo kale duwan. Intaa waxaa dheer, miisaanka cusbooneysiintu waa 1.103,8 MB; Waxaa lagugula talinayaa inaad ka soo dejiso adoo adeegsanaya Wi-Fi xasiloon oo dhaqso leh, si looga fogaado isticmaalka aan loo baahnayn ee xirmada xogta moobiilka.
Dib u eegis fudud, taleefanku wuxuu ku yimaadaa 6.4-inch shaashad IPS LCD shaashad leh FullHD + qaraar, Qualcomm's Snapdragon 665 processor chipset, 4 GB oo RAM ah, 128 GB oo ah keydinta gudaha ah iyo batari 4.000 mAh ah. lacag bixinta 15 W.
Waxay kaloo leedahay 48 MP (weyn) + 16 MP (xagal ballaadhan) + 2 MP (macro) kamarad saddex-laab ah iyo 16 MP oo sawir-qaade selfie ah oo ku dhexjiran daloolka shaashadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Moto G Pro waa taleefankii ugu horreeyay ee Motorola si loo helo cusboonaysiinta Android 11
321 Shotout waa toogte ku xaddidan shaqooyinka, laakiin waa soo jiidasho leh
Xiaomi waxay dacwad ku oogaysaa dowladda Mareykanka inay ku dartay liiska madow